Ciidaha Muslimiinta & Xisbiga SocialDemokraterna | Somaliska
Xisbiga SocialDemokraterna ayaa ku baaqay in la aqoonsado ciidamaha Muslimiinta oo dadka la fasaxo. Xogyahaha xisbiga Carin Jämtin ayaa sheegtay in loo baahanyahay in dib loo eego fasaxyada Sweden. "Waqti hore ayaan dib u eegnay. Guud ahaan fasaxyadeena marka laga reebo Midsommer iyo Valborg waxay xiriir la leeyihiin diinta Kiristaanka. Sweden waa wadan dhaqamo kala duwan marka waa in la eegaa sidii lagu suurto galin lahaa isbedel" ayay tiri Carin Jämtin Waxay sheegtay Carin in aysan macquul ahayn in maalin kale oo fasaxa lagu soo siyaadiyo kuwa hada jira balse la sameyn karo in kuwa Kiristaanka lagu badalo mid Muslim ah. Carin ayaa sheegtay in tusaale ahaan Ciidul Fitri laga dhigi karo maalin fasax ah. Balse waxaa ka soo horjeestay Carin Jämtin urur lagu magacaabo Humanisterna iyagoo sheegay in dadka Sweden ku nool aysan ciidaha Kiristaanka u dabaal dagin diin darteed balse ay tahay waqti layska baashaalo oo aan diin xiriir la lahayn. Waxay sheegeen in ay haboontahay in guud ahaan layska dhaafo waqtiyada fasaxa ee ku saleysan diimaha oo la sameeyo maalmo fasax ah oo dadka shaqaalaha ay iskood u qaadan karaan. Sweden ayaa hada waxay leedahay 11 maalmood oo fasax ah iyadoo sagaal ka mid ah ay yihiin kuwo ku saleysan diinta Kiristaanka. Sidoo kale waxaa jira 11 maalmood oo kale oo loo aqoonsanyahay maalmo fasax ah balse aysan qasab ahayn in qofku lacag ku helo haddii uusan shaqada imaan.
Xisbiga SocialDemokraterna ayaa ku baaqay in la aqoonsado ciidamaha Muslimiinta oo dadka la fasaxo. Xogyahaha xisbiga Carin Jämtin ayaa sheegtay in loo baahanyahay in dib loo eego fasaxyada Sweden.
“Waqti hore ayaan dib u eegnay. Guud ahaan fasaxyadeena marka laga reebo Midsommer iyo Valborg waxay xiriir la leeyihiin diinta Kiristaanka. Sweden waa wadan dhaqamo kala duwan marka waa in la eegaa sidii lagu suurto galin lahaa isbedel” ayay tiri Carin Jämtin
Waxay sheegtay Carin in aysan macquul ahayn in maalin kale oo fasaxa lagu soo siyaadiyo kuwa hada jira balse la sameyn karo in kuwa Kiristaanka lagu badalo mid Muslim ah. Carin ayaa sheegtay in tusaale ahaan Ciidul Fitri laga dhigi karo maalin fasax ah.
Balse waxaa ka soo horjeestay Carin Jämtin urur lagu magacaabo Humanisterna iyagoo sheegay in dadka Sweden ku nool aysan ciidaha Kiristaanka u dabaal dagin diin darteed balse ay tahay waqti layska baashaalo oo aan diin xiriir la lahayn. Waxay sheegeen in ay haboontahay in guud ahaan layska dhaafo waqtiyada fasaxa ee ku saleysan diimaha oo la sameeyo maalmo fasax ah oo dadka shaqaalaha ay iskood u qaadan karaan.
Sweden ayaa hada waxay leedahay 11 maalmood oo fasax ah iyadoo sagaal ka mid ah ay yihiin kuwo ku saleysan diinta Kiristaanka. Sidoo kale waxaa jira 11 maalmood oo kale oo loo aqoonsanyahay maalmo fasax ah balse aysan qasab ahayn in qofku lacag ku helo haddii uusan shaqada imaan.